विदेशबाट दशैं खर्च पठाउँदै हुनुहुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस् – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विदेशबाट दशैं खर्च पठाउँदै हुनुहुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्
काठमाडौं / शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १७ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८२रुपैयाँ तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८३ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३१पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ
एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय १० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ११ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ ।